VaMeng Lingwen vanogara vachibvunzwa kuti "Bhizinesi rakavambwa sei newe uye rakapinda mumusika wepasi rose sezvo uri amateur webiotechnology munda" .Akataura munguva pfupi kuti "Ita zvakanaka, Usabvunze nezve ramangwana". Akatitsanangurira, zvichibva pa ...
Rwendo rwemakore gumi kuenda kumusoro kwenyika
Rwendo rwemakore gumi kuenda kumusoro kwenyika 2011, Gaobeidian PRISES Biotechnology Co, Ltd. yakavambwa; 2015, Iyo kambani inogadzira: Makondomu, Pamuviri uye Ovulation bvunzo kit yakabudirira kupfuudza iyo CE certification 2018, Iyo kambani yakapinda kuSouth Africa International Exhibit ...
Munguva yaGunyana naGumiguru, iyo VP yeTechnology department rakatungamira timu yeR & D kuita Corona virus antigen test kit. Muna Gumiguru 26, Silk Road International Cooperation Working Committee (SRIC) yakabata vhidhiyo yechipiri ...
Political Bureau yeCPC Central Committee yakaita musangano wekukurukura nezvekudzivirira uye kutonga kwe COVID-19.
2020, Kukadzi 20, iyo Political Bureau yeCPC Central Committee yakaita musangano wekukurukura nezvekudzivirira uye kutonga kwe COVID-19. Zuva rechipiri, vatungamiriri vematunhu vakashanyira fekitori, vachinzwisisa mamiriro ekusimudzira kutangazve kushanda nekugadzira. Mukupindura kune izvo zvinodikanwa zve ...